Ny antony mahatonga ny ny Corona-tahotra Revealed | Apg29
Ny governemanta notapatapahina Te-karama!
Ezaka hampihenana ny ora fiasana, ary hampihenana ny karama avy eo dia nanomboka ela be talohan'ny olona nandre ny zava-baovao Coronavirus avy Wuhan any Shina. Ahoana no eto amin'izao tontolo izao afaka mahalala na inona na inona izy ireo momba ny vaovao sy ny valan'aretina virosy corona niely nisy ela be talohan'ny? !!
onsdag 4 mars 2020 16:03
Tsy izany! Ny fandaharam-potoana tena ao ambadiky ny corona virosy Fampitahoran'ny! Fampiharihariana io dia afaka mamaky andinin-teny eto amin'ity Aftonbladet :
Fohy ora ary mihena karama mandritra ny fotoana voafetra noho ny corona niely otrik'aretina . Raha fintinina, ny governemanta nanolotra ny lalàna vaovao amin'ny fotoana fohy ny asa mba tsy ho toy izany koa korontana eo amin'ny olana ara-bola ny 2008. Ny tanjona dia ny hanomezana fanampiana ny sendika sy ny mpampiasa amin'ny orinasa ny tra-boina - mba tsy fandroahana faobe.
My sahy. Ny iray dia mihevitra fa ny drafitra dia haingana påkomna amin'ny tahotra henjana amin'izao fotoana izao hetsika mifandray amin'ny corona niely virosy. Fa tsy izany mihitsy. Ny Governemanta Finance Magdalena Andersson (S, MP) karazana miara-miasa ny roa tonta (C, L) tao amin'ny adihevitra lahatsoratra ao amin'ny Aftonbladet sy manambara ny tenany sy ny tena fandaharam-potoana:
"Ny mila izany-dalàna mazava sy ny asa efa miseho nandritra ny fotoana ela mba hanitatra rafitr'ity tontolo ity fohy andro ny asa. Ny nipoaka ny vaovao Coronavirus mazava tsara dia mampiseho fa ny famokarana sy ny asa any Soeda dia voakasiky fikorontanana eo amin'izao tontolo izao."
My sahy. Ezaka hampihenana ny ora fiasana, ary hampihenana ny karama avy eo dia nanomboka ela be talohan'ny olona nandre ny zava-baovao Coronavirus avy Wuhan any Shina. Ahoana no eto amin'izao tontolo izao afaka mahalala na inona na inona izy ireo momba ny vaovao sy ny valan'aretina virosy corona niely lavitra mialoha eo anatrehan'ny nisy? !!
Afaka ho mazava kokoa?
Aho hatramin'ny voalohany aho rehefa namaky voalohany, naneho hevitra momba ny Coronavirus ny tatitra, ary miahiahy fa misy zavatra hafa mety ho tompon'andraikitra. Ary ny ahiahy tanteraka. Afaka ho mazava kokoa?
Ary raha nieritreritra aho, dia ny hoe te-hanatanteraka ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso bebe kokoa ny olom-pireneny.
Sa ny tanjona ny takaitra ny toe-karena? Fa ny toe-karena sy ny fanaraha-maso dia hijaly fiaraha-monina ihany koa ny fanaraha-maso mitombo. Ahoana no mikendry ny ho roa?
Fa ankehitriny ny soedoà nahy governemanta dia nanambara fa ny tanjon 'ny tahotra ny Coronavirus ny toe-karena. Na ahoana na ahoana, fa Soeda sy ho fanombohana. Mety mazava ho azy ho fanitarana ny taty aoriana miaraka amin'ny zavatra hafa maro.
Marani-tsaina polisy Shinoa manana fiarovan-doha ny mamantatra corona. Photo: dailymail.co.uk.
Fa angamba izany eto amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ihany koa ny fiaraha-monina tsy dia lavitra. Ankehitriny, misy tatitra fa ny polisy Shinoa nahazo vaovao "Super fitaovam-piadiana" mba mamantatra corona .
Polisy tao Chengdu sy Shenzen efa fitaovana tamin'ny marani-tsaina fiarovan-doha izay afaka mamantatra ny olona amin'ny tazo, izay iray amin'ireo soritr'aretin'ny ny corona amin'ny dimy metatra. Voalaza fa ny fiarovan-doha dia novolavolaina manokana hiadiana ny Coronavirus.
Inona moa no mba afaka hanana izany fiarovan-doha teny teknolojia avo lenta anatin'ny fotoana fohy?
Arakaraka ny mametraka ny tenako ho eo an- corona otrik'aretina vokatry ny mitandrina kokoa aho ny hitondra ahy ho tonga mba hampitahorana ny fampielezan-kevitra. Tsy tsara ny marina ihany no tanjona fandinihana fambara?
Mandainga ny fotoana
Miaina amin'ny fotoana farany, ka na inona na inona mety hitranga izao. Tamin'ity indray mitoraka ity ihany koa ny tena mamitaka satria niely be lainga sy ny fampielezan-kevitra ny hifehy ny olona ho any amin'ny lalana izay no tena tanjona fandaharam-potoana.
Tena zava-dehibe ny manana ny zavatra rehetra miaraka amin'i Jesoa, ary vonona hovonjena. Raha toa ianao ka tsy mbola nandray an'i Jesosy ary voavonjy avy eo izany dia ora tokony haka azy ankehitriny.
Publicerades onsdag 4 mars 2020 16:03:10 +0100 i kategorin och i ämnena: